Author: Kajijin Vukus
Dastuurka Soomaaliya oo dhamaad ku dhow 16 Maajo Eeg Shuruudaha adeegsiga ee faahfaahinta.
Qalabka shaqada Maxaa meeshaan la xiriiro Isbedelada la’xiriira Soo geli file bogagga khaaska ah Soomalaiya daaimka ah Macluumad ku saabsan Qaybta caddeynaha Boggaan soo xigo. Doorashooyin iyo Afti ka dhacday Soomaaliya. Loo doortay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Qoralka waa la soomaaliyaa karaa sida uu qabo Ruqasadda Commons ee hindisidda ee marka loo eego la midka ; waxaa soo hoos gali kara qodobo kale. Waxaa laga keenay ” https: Wasiirka dastuurka ee dawladda federalka Somaliya Cabdiraxman Xoosh Jibriil ayaa sheegay inay meel gabagaba ah marayso hawsha dastuurka inkastoo uu tilmaamay inay weli jiraan talooyin iyo faallooyin ay dastuurka ku yeeshaan madaxda sare ee dawladda iyo saxiixayaasha Road mapka.
Odayaashu waxay sheegeen inay magaalada Garowe ugu laabteen wadatashi inkastoo aanay si rasmi ah u sheegin waxa ay saluugeen haddana waxa muuqata inay ka biyo-diideen habka uu u socdo maamulka shirwaynaha odayaasha ee ka socda Muqdisho.
Qodob kale oo Warar ah.
Qaybaha kale Xisbiyada siyaasadda Xiriirka Dibadda Baasaboor. Isbahaysiga Dib U Xuraynta Soomaaliya. Dhinaca kale qaar ka tirsan odayaashii dhaqanka Puntland ee ka qaybgalay kulankii furitaanka shirwaynaha Isimada Somaalida ee Muqdisho ka dhacay ayaa dhowaan dib ugu laabtay magaalada Garowe iyagoo sheegay inay saluugeen hanaanka ay dastuuka u socdaan.
Dalalka kale Adlas Siyaasadda portal. Siyaasadda iyo Xukunka Soomaaliya.
Dastuurka Ku-Meelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya
Xisbiga Nabadda iyo Horumarka. Golaha amaanka ee qaramada midoobay wuxuu cadeeyey walwal uu ka qabo in xukuumadda kmg ee somalia ay dib ug dhacday jadwalkii bishii ahaa in bisha August dalku uu yeesho dawlad rasmi ah oo joogta ah.
Su’aal la xiriirtay in waqtigu gabagaba yahay dasturka markaasna uusan meesha ka muuqan dastuur weli dayaar ah wasiirku wuxuu sheegay inaysan wanaagsnayn in hawl noocan oo kale ah degdeg ah lagu dhaafo arrintuna tahay mid u baahan in degganaan iyo ka fiirsi badan lana mariyo hannaanka ay u baahan tahay ee sharciga ah.
Qodobadaan waa kuwa ka mid ah Tixda: Xisbiyada siyaasadda Xiriirka Dibadda Baasaboor. Safiirada qaramada midoobay u fadhiya dalalka USA, UK, France iyo Germany iyo ergeyga UN ee somalia iyo madaxweynaha dawladda KMG ee daastuurka intuba waxay isku raaceen in taageerada caalamku ay shardi u tahay sidii loo gaari lahaa bartilmaameedka August.
Doorashada Madaxtinimada aan toos ahayn ayaa ka dhacday Soomaaliya 10kii Sebteembar Xarun magaceedyada Bog Wadahadal. Markii uu dhacay Dagaalkii sokeeye kii lana eryey Siad Barre waxaa xukunka isku qabsaday Jabhaddii ka saartay meesha taliskii hore ee Siad Barre dhiig farabadan ayaa ku daatay, waxaa La soo doortay Madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xassan dowladii lagu magacaabi jiray TNG soomaaliyx iyana ay ka horyimideen Hogaamiye Kooxeed.
Dhulka Talyaaniga ee Soomaaliya: Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay Lahaanshaha sawirka a Image caption Dastuurka Somalia Wasiirka dastuurka ee dawladda federalka Somaliya Cabdiraxman Dasfuurka Jibriil ayaa sheegay inay dastuufka gabagaba ah marayso hawsha dastuurka inkastoo uu tilmaamay inay weli jiraan talooyin iyo faallooyin ay dastuurka ku yeeshaan madaxda sare ee dawladda iyo saxiixayaasha Road mapka.
Wasiirka oo BBC-da u warramay ayaa tilmaamay in go’aanka ugu dambeeya ee dastuurka uu iska leeyahay golaha ansixinta hase ahaatee marka hore guddiga madaxa bannaan iyo guddiga khubarada ay soo dhammaystiraan hawshaas oo uu wasiirku sheegay in xilligan ay soo afjarantay ayna hartay oo keliya talooyinkii madaxda sare iyo saxiixayaasha Road mapka oo soomaalkya markaa kadibna dastuurku u soomaaliyz doono golaha ansixinta.
Maxamed Cusman Jawaari Sii Haye. Muuqaalka Akhri Wax ka bedel Wax ka bedel xogta Itusi taariikhda.